Xildhibaan Cumar Filish oo dawo loogu qaaday dalka Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xildhibaan Cumar Filish oo dawo loogu qaaday dalka Turkiga
Muqdisho – Mareeg.com: Xildhibaan Cumar Maxamed Maxamuud (Cumar Filish) oo ka mid ahaa xildhibaannadii ku dhaawacmay weerarkii Alshabaab sabtidii lasoo dhaafay ku qaadeen xarrunta Golaha Shacabka ayaa manta loo qaaday dalka Turkiga.
Xildhibaanka oo qabay dhaawac fudud ayaa sheegay in xaaladiisa ay wanaagsan tahay, isla markaana safarkiisa yahay mid caafimaad oo dalka Turkiga lagu soo daweynayo, kadib markii arrintaas ay soo dhameysay dowladda Federaalka Soomaaliya.
Cumar Finish warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha sheegay inuu uga mahadcelinayo dowladda Soomaaliya dadaal ay ku bixisay sidii loogu qaadi lahaa dalka Turkiga si loogu soo daweeyo.
“Dalka Turkiga ayaan daweyn ugu socdaa, kaddib markii dowladda Turkiga ay ii fidisay daryeel caafimaad,” ayuu yiri Cumar Finish oo intaa raaciyey “Anigoo fursaddan ka faa’iideysanaya waxaan halkan tacsi uga dirayaa dadkii ku dhintay weerarkaas, kuwii ku dhaawacmayna waxaan u rajeynayaa caafimaad aad u wanaagsan,”.
Xildhibaan Cumar Filish ayaa sidoo kale shacabka iyo dowladda dalka Turkiga uga tacsiyeeyey dilkii gardarrada ahaa ee shalay loogu geystay KM-4 sarkaalka u dhashay dalka Turkiga, kaasoo u shaqeynayay shirkadda Turkish Airlines.
26-kii bishaan ayaa sidan oo kale dalka Turkiga loo qaaday xildhibaan Faarax Cawad Jaamac iyo askari ka mid ahaa ilaalada xarunta baarlamaanka Soomaaliya oo xaaladooda caafimaadna dalka wax looga qaban waayay.
Diyaarado raashin & dawo gaarsiiyey degmada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan
Mahiga oo markale usoo hiloobay Muqdisho